Bulshada Rayidka: Laba caqabad ayaa ku hareereysan shirka Dhuusamareeb
Hoggaamiyayaasha bulshada rayidka ee ku sugan magaalada Dhuusamareeb ayaa sheegaya in is-aamin darro iyo tanaasul la’aan ay yihiin caqabadaha ugu waaweyn ee ku hareeraysan wada-hadallada Dhuusamereeb.
Ururrada bulshada rayidka ayaa hadalkan ku sheegay war-saxaafadeed ay maanta soo saareen, kadib markii ay la kulmeen saamilayda.
Waxay bulshada rayidka ugu baaqeen ka qayb galayaasha inay shirka u furaan qaybaha kale ee bulshada.
Qodob kale oo ay ku baaqeen ayaa ahaa in madaxda Soomaliyeed ee ku kulansan Dhuusamareeb ay dantooda gaarka ah ka hormariyaan danta guud una tanaasulan shacabkooda islamarkaasna ogaadan in talada lala leeyahay, sida lagu sheegay war-saxaafadeedka.
Ugu dambayn waxay ururrada bulshadu ugu baaqeen saaxibada iyo taagerayaasha beesha caalamka ee Soomaaliya inay ka yeeshan aragti mideysan oo u horseedi karta taageeradooda iney noqoto mid wax ku ool ah, horseedi kartana ku taageerida Soomaaliya helida degenaashaha iyo dhameystirka dhismaha dowladnimada Somaaliyeed, ayaa lagu yiri war-saxaafadeedka.